SAADAAL: Khabiirka Ciyaaraha Robbie Savage Oo Saadaaliyey Horyaalka Xili Ciyaareedkan - Min Kooxda Koobka Qaadaysa Illaa Saddexda Dib U Doona Iyo Man City & Chelsea Oo Uu Niyad-jabiyey - Gool24.Net
SAADAAL: Khabiirka Ciyaaraha Robbie Savage Oo Saadaaliyey Horyaalka Xili Ciyaareedkan – Min Kooxda Koobka Qaadaysa Illaa Saddexda Dib U Doona Iyo Man City & Chelsea Oo Uu Niyad-jabiyey
September 5, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
41 maalmood oo kaliya ayaa kasoo wareegay markii horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkii hore 2019-20 la dhamaystiray iyadoo kooxuhuna ku rafaadaan garoomo cidlo ah iyo muddo badan oo ay guryaha ugu xaraysnaayeen Fayraska korona, kuwaas oo ay u baddaleen kulamo xidhiidh ah oo nefiska u diiday.
Ciyaartoyda ayaan xagaagan helin waqti fiican oo ay kusoo nastaan, waxaana laba ilaa saddex toddobaad kaddib ay kusoo laabteen tababarka iyagoo wali uu haysto walaac la xidhiidha badqabkooda caafimaadka ee Fayraska inkasta oo firka-naxii hore iyo cabsidii hore ee laga qabay xanuunka uu hoos u dhacay.
Horyaalkii hore, waxa abaartii soddonka sannadood saarnayd kaga baxday Liverpool oo qaadday koobkeedii ugu horreeyey ee Premier League ah muddo soddon sannadood ah oo ay ka qatanayd kaddib, waxaana Jurgen Klopp uu u dagaallami doonaa xili ciyaareedka cusub inuu difaacdo koobkaas si la mid ah Manchester City oo labadii sannadood ee ka horreeyey si xidhiidh ah ugu guuleysatay.
Laakiin doorkan, waxa muuqata in horyaalku uu ka adag yahay sidii hore oo ay kooxihii dhutinayay fasal ciyaareedkii hore ay si weyn isku dhiseen, sida Chelsea oo dersin ciyaartooyo ah soo iibsatay, Arsenal oo dhawr ciyaartoy kusoo kordheen iyo Manchester United oo hal saxeex oo weyn samaysay, walina suuqa ku jirta.
Tababareyaasha ku loollamaya xili ciyaareedkan, 16 ka mid ah waxay ahaayeen kuwii dhamaadka fasalkii hore xafiiltanka weyni dhex-marayay, waxaana kaliya ku cusub afar macallin, balse kooxaha usoo dallacay horyaalka sannadkan ayaa qaarkood ay yihiin kuwo xamaasaddoodu cirka ku shareeran tahay oo xallad cusub kusoo kordhin doona ciyaaraha, gaar ahaan Leeds United oo kulan kasta oo ay ciyaarayso il gaar ah lagu hayn doono.
Horyaalka xili ciyaareedkan, waxay khubarada ciyaaruhu bilaabeen inay saadaal kasii bixiyaan iyadoo toddobaad ka hadhsan yahay xilliga uu bilaabmayo, waxaana muuqata in mid walba uu si’ u arkayo oo ay ku kala aragti duwan yihiin.
Khabiirka ciyaaraha ee Robbie Savage oo isaguna soo saaray saadaashiisa xili ciyaareedka ayaa waxa uu shaaciyey sida uu noqon doono miiska kala-sarraynta horyaalka Premier League marka la ciyaaro kulanka ugu dambeeya, taas oo ay ku caddahay kooxda horyaalka ku guuleysan doonta, afarta kaalmood ee Champions League iyo saddexda naadi ee dib ugu noqon doona Championship-ka.
Robbie Savage waxa uu horyaalka u saadaaliyey Liverpool oo uu tilmaamay inay wali u dhisan tahay sidii ay horyaalka ku qaadday fasal xili ciyaareedkii hore, dhamaan xiddigaheediina ay wali u diyaarsan yihiin, waxaanu yidhi: “Jurgen Klopp maaha nooca tababareyaasha ogolaada inay godkooda biyuhu ugu soo galaan. Waxay haystaan kooxdii 196ka dhibcood ka keentay horyaalka labadii xili ciyaareed ee u dambeeyey, waxay leeyihiin difaac midaysan oo uu ku jiro qalbi-asadkooda Virgil van Dijk oo sees u noqon doona guulo badan. Afar ciyaarood oo kaliya ayaa laga badiyey 77 kaas ciyaarood ee Premier League, waana wax sii socon doona.”
Robbie Savage waxa uu kaalinta labaad u saadaaliyey Manchester United oo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu dibu-dhis ku samaynayo, qaybtii dambe ee xili ciyaareedkii horena natiijooyin fiican keentay.
Manchester City oo ciyaartoygeedu u dhan yihiin, walina laacibiin cusub qaarkood lasoo wareegtay kuwo kalena ku raad-joogta ayaa ayaa uu Savage u saadaaliyey inay geli doonto kaalinta saddexaad.
Saadaasha Robbie Savage oo dhamaystiran:
Madhacayso robie savage